I-LG G6 eSpain ihlaziya kwi-Android 8.0 Oreo | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Tutorials, Iinguqulelo ze-Android
Inkqubela phambili ye-Android Oreo iyacotha, icotha nangaphaya kophuhliso lweNougat. Into ebangela inkxalabo kuGoogle. Ukuza kuthi ga ngoku uninzi lweefowuni eziphakathi neziphakathi zilahlekile ukufumana uhlaziyo. Nangona sinokongeza enye kuluhlu lweefowuni ezihlaziya. Ukusukela el LG G6 iqala ukuhlaziya kwi-Android 8.0 Oreo eSpain.
Uhlaziyo abasebenzisi abalinde ixesha elide. Kuba kwakusekupheleni konyaka ophelileyo xa kutyhilwa ukuba i-beta ye-LG G6 yayisele iphantsi kovavanyo kunye novavanyo. Nangona abasebenzisi kuye kwafuneka ukuba balinde phantse iinyanga ezintandathu ngaphezulu.
Inkampani uqobo ibe yiyo ophetheyo ukubhengeza kwinethiwekhi yoluntu ukufika kolu hlaziyo kwi-Android 8.0 Oreo ukuya esiphelweni sonyaka ophelileyo ukusuka kwinkampani. Iindaba ezimnandi kubo bonke abo banayo le fowuni. I-OTA iqala ukufika.
Esi siqinisekiso siza emva kokuba i-OTA sele ifunyenwe kwamanye amazwe aseYurophu. Ke ibingumcimbi weentsuku ngaphambi kokuba ufikelele kubasebenzisi nge-LG G6 eSpain. Into eyenzekayo ekugqibeleni sele ikhona. Kuya kufuneka sele unalo uhlaziyo olukhoyo okanye luya kufika kwiiyure ezimbalwa ezizayo.
Kukho abasebenzisi abayifumene kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, njengoko bebeka izimvo kwiinethiwekhi zentlalo. Ke ekugqibeleni, Ukuba unayo i-LG G6 ungonwabela i-Android 8.0 Oreo. Nangona abasebenzisi abaninzi bekhalaze malunga nokulibaziseka okukhulu kwegama lokunika abasebenzisi olu hlaziyo.
Ngokuqinisekileyo i-LG ayisiyiyo kuphela ethatha ixesha elide. Inyani yile yokuba iimveliso ezininzi zithatha ixesha ukubonelela ngohlaziyo kwi-Android 8.0 Oreo. Ingxaki, kuba ngaphezulu nje kweenyanga ezimbini isikhumbuzo sokuqala sale nguqulelo sibhiyozelwa kwintengiso. I-Android P iza kwiinyanga ezimbini, kwaye hayi ne-6% yeefowuni zisebenzisa i-Android Oreo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » Uhlaziyo lwe-LG G6 kwi-Android 8.0 Oreo eSpain
Ndiyathemba ukuba ndiza kufika eArgentina kungekudala
I-Xiaomi Mi 8 Edition Edition: iinkcukacha kunye neempawu zokuphela okuphezulu kwenkampani